कोही माओबादीले जनयुद्द दिवस मनाए, कोहीले भ्यालेन्टाइन डे मनाए ! – Jaljala Online
कोही माओबादीले जनयुद्द दिवस मनाए, कोहीले भ्यालेन्टाइन डे मनाए !
Posted on February 13, 2020 February 13, 2020 Author Jaljala Online	Comment(0)
विप्लब माओबादीले आज देशका विभिन्न भागमा २५ औं जनयुद्द दिबस मनाएको छ । जनयुद्दले २५ वर्षहरु पार गरेको उपलक्ष्यमा स्वदेशमा मात्र नभएर बिदेशमा समेत दिवस मनाइएको छ ।
फागुन १ गते देश-विदेशमा रहेका माओबादीहरुले २५ औंँ जनयुद्ध दिवस मनाइरहेको समयमा विश्वका कयौँ युवकयुवती भने पश्चिमा संस्कृतिको भ्यालेन्टाइन डे’मा रमाइरहेका छन् । सत्ताधारी कम्युनिष्टहरु पनि भ्यालेन्टाइन डे’मा रमाइरहेका छन् ।
बिगतमा संगै युद्द लडेका माओबादीहरु यतिबेला भने केहि सत्तामा छन् भने केहि सत्ता बाहिर अर्को क्रान्तिको कुरा गरिरहेका छन् ।
सत्ता बाहिर हुनेहरुले सत्तामा बसेका माओबादीहरुलाई जनयुद्द भुलेको आरोप लगाई रहेका छन् । सत्तामा बसेकाहरुको लागि जनयुद्द दिवस दिवा सपना भएको बताउदै जनयुद्दको नाम समेत सुन्न नचाहेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
चितवन मेडिकल कलेजका सङ्घर्षशील युवा विद्यार्थीहरूले देशमा जनतन्त्र स्थापना गर्न १० वर्षसम्म सञ्चालित जनयुद्धको २५ औँ दिवस भव्यतापूर्वक मनाएका छन् । विद्यार्थीले जनयुद्धमा होमिएका घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता र उच्च बलिदान गरेका महान् सपूतहरूलाई सम्झिँदै परिआएको खण्डमा मेडिकल सङ्घर्षका क्रममा फेरि अर्को आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने सङ्घर्षमा होमिने बाचा गर्दै स्वतस्फूर्त ढङ्गले मैनबत्ती प्रज्वलन गरेका छन् ।
विद्यार्थीहरूले मेडिकल क्षेत्रमा मौलाएको विकृति, भ्रष्टाचार र लूटका विरुद्ध नेतृत्वदायी सङ्घर्ष सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरुले अर्को क्रान्तिको आवश्यकता महसुस गर्दै मैनबत्ती प्रज्वलन गरेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कपिलवस्तु जिल्लाअन्तर्गत पश्चिम कमान्डमा २५ औँ जनयुद्ध दिवस सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला सेक्रेटरी शेरमानको आतिथ्य थियो । उक्त कार्यक्रमलाई पावेलले सम्बोधन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला पार्टीका सचिवालय सदस्य सन्तोष, जिल्ला सदस्य सूर्य र कार्यक्रमको अध्यक्षता सङ्घर्षले गरेका थिए । कार्यक्रममा जनताको व्यापक र उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमका मुख्य वक्ताले जनयुद्धको मूल मर्म एकीकृत जनक्रान्तिले पकडेको र कुनै पनि हिसाबले उद्देश्यमा पुगिछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
नेकपा चितवनको आयोजनामा बिहीबार राप्तीको वीरेन्द्रनगरमा सयौँको उपस्थितिमा भव्य रूपमा २५ औँ जनयुद्ध दिवस सम्पन्न भएको छ ।
वीरेन्द्रनगरको बीच सडकमा (पूर्व–पश्चिम राजमार्ग) जाम गरी जनयुद्ध दिवस मनाइएको खबर प्राप्त भएको छ । कार्यक्रममा अखिल (क्रान्तिकारी) का जिल्ला अध्यक्ष रेम्बोर्जेले सम्बोधन गरेका थिए ।
उनले भने, ‘दलाल सत्तालाई समूल नष्ट गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि सम्पूर्ण जनसमुदाय क्रान्तिमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
यसैगरी मकवानपुर जिल्लाको राङ्सीराङमा सयौँ जनसमुदायको उपस्थितिमा जनयुद्ध दिवस मनाइएको खबर प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी चितवनको कालिका सिद्धिमा पनि जनयुद्ध दिवस मनाइएको खबर प्राप्त भएको छ ।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका टुडेडाँडामा करिब ३ सयजनाको उपस्थितिमा जनयुद्ध दिवस मनाइएको छ । सञ्चालक जिल्ला सदस्य रामले गरेका थिए । जिल्ला इन्चार्ज वाटर र सेक्रेटरी पासाङले शुभकामना दिएका थिए ।
त्यसैगरी बाराको रामराजा बहुमुखी क्याम्पसमा सयौँको उपस्थितिमा जनयुद्ध दिवस मनाइएको छ । त्यसैगरी रौतहट जिल्लाको विजयबस्तीमा पनि जनयुद्ध दिवस मनाइएको खबर प्राप्त भएको छ ।
शैक्षिक संस्थाहरूको जनयुद्ध दिवस
अखिल (क्रान्तिरकारी) ले विभिन्न कार्यक्रम गरी जनयुद्ध दिवस मनाएको छ । यहाँका शैक्षिक संस्थाहरूमा अखिल (क्रान्तिकारी) ले शुभकामना आदानप्रदान, अन्तरसंवाद, प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेर जनयुद्ध दिवस मनाएको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले बुटवल बहुमुखी क्याम्पस, लुम्बिनीलगायत क्याम्पसमा जनयुद्ध दिवस मनाएको छ । विद्यार्थीहरूले अबिर लगाएर एकआपसमा शुभकामना आदानप्रदान गरेका थिए । त्यस अवसरमा विद्यार्थीहरूले मिठाइ पनि बाँडेका थिए ।
कार्यक्रममा अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा लुम्बिनी ब्यूरो संयोजक वीरेन्द्र विकले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
त्यसैगरी अखिल (क्रान्तिकारी) कैलालीले पनि २५ औँ महान् जनयुद्ध दिवसका अवसरमा जिल्लाका धनगढी उपमहानगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, लम्की, घोडाघोडी, अत्तरियालगायत विभिन्न ठाउँमा ब्यानर प्रदर्शनसहित शुभकामना आदानप्रदान गरेको छ ।
सुदूरपश्चिमकै अग्रणी शैक्षिक संस्था कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अखिल (क्रान्तिकारी) कैलालीले विद्यार्थीलाई अबिर लगाएर मिठाइ तथा चकलेट वितरण गर्दै शुभकामना कार्यक्रम सप्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य तथा कैलाली जिल्ला इन्चार्ज बबरजङ सिंह, जिल्ला अध्यक्ष सुवास मजोशीलगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
सरकारले विद्यार्थी नेता–कार्यकर्तामाथी थुपरेको झूट्टा मुद्दा खारेज गरी दमन, धरपकड र विद्यार्थीमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल हटाएर सहज वातावरण बनाउन विद्यार्थी नेताहरूले आग्रह गरेका थिए ।
सर्लाहीको पीपलदमारमा २५ औँ जनयुद्ध दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा ब्युरो सदस्य सचिन गोपालले सम्बोधन गरेका थिए भने सञ्चालन विकल्पले गरेका थिए ।
वक्ताहरूले महान् जनयुद्धका मूल्यमान्यताबाट स्खलित प्रतिक्रान्तिकारी, आत्मसमर्पणवादी र सुधारवादीहरूले जनयुद्धका सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई पद र पैसामा सौदाबाजी गर्दै लिलाममा बिक्री गरेको बताए । उनीहरूलाई एकीकृत जनक्रान्तिको सङ्ग्राामबाट खबरदारी गरिने पनि वक्ताहरूले बताए । महान् जनयुद्धमा बगेको रगत, पसिना र आँसुको अधुरो सपनालाई पूरा गरिछाड्ने दृढ प्रतिबद्धता सचिन गोपालले व्यक्त गरे ।
नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा कतारले २५ औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश सम्प्रेषण गरेको छ ।
मोर्चाका अध्यक्ष जयकिशोर पोद्दार (जेपी) ले सम्प्रेषण गरेका सन्देशमा भनिएको छ, ‘तमाम ज्ञातअज्ञात महान् सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताबाट बेपत्ता बनाइएका तथा घाइते–अपाङ्ग हुनुभएका आदरणीय कामरेडहरूलाई सम्झिँदै, विभिन्न भूगोल तथा हरेक तह–तप्कामा रहेर काम गर्दै क्रान्तिलाई टेवा पुर्याउन लागिरहनुभएका सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरूमा महान् जनयुद्ध को २५ औँ वर्षगाठको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’
नेकपा डोटीले स्कुललाई खेल सामग्री वितरण गरी २५ औँ जनयुद्ध दिवस मनाएको छ । जिल्ला इन्चार्ज तर्कराजको अध्यक्षातामा सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सेती–महाकाली ब्युरो कार्यालय सचिव विपीन रहेका थिए । जिल्ला सचिव कालु पाण्डेले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्थानीय जनता र अभिभावकको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो ।
जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर गरिएको उक्त कार्यक्रममा ब्युरो कार्यालय सचिव विपीनले देश र जनताको मुक्ति नहुन्जेलसम्म क्रान्ति जारी रहने बताए । जनता निराशामा रहेको, जनताको मुक्ति नभएको र जनयुद्धका सबै विषयमा प्रचण्ड–बाबुरामले धोका दिएकाले क्रान्ति जारी राख्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा विद्यालयका प्रिन्सिपलले नेपालमा भएको जनयुद्धले जनताको चेतनाको विकास भएको तर लक्ष्य पूरानहुँदै जनयुद्ध सामप्त गरेर नेतृत्वले धोका दिएको बताए ।
दाङ, राेल्पा, सल्यान, रुकुम
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशभर २५ अाैं जनयुद्ध दिवसकाे अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरि भव्य रूपमा जनयुद्ध दिवस स्मरण गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाङले जिल्लाका ५ ठाउँमा २५ औं जनयुद्ध दिवस कार्यक्रम गरि मनाएको छ । राप्ती गाउँपालिका, लमही नगरपालिका, घाेराही क्षेत्र र तुलसीपुरकाे २ ठाउँ गरि ५ ठाउँमा १०० अाैं जनताकाे उपस्थितिमा जनयुद्ध दिवस मनाएको छ ।
यसै अन्तरगत नेकपा राप्ती गाउँपालिकाकाे अायाेजनामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला सेक्रेटरी भगवाणराज र अखिल (क्रान्तिकारी) का महासचिव प्रकाश शाहीको उपस्थिति तथा निरन्तरकाे सहजिकरणमा २५ अाैं जनयुद्ध दिवसकाे अवसरमा अविर तथा फलफुल समेत वितरण गरेर मनाएको छ।
यस्तै राप्तीका राेल्पा, सल्यान, रुकुम लगायतका विभिन्न ठाउँमा जनयुद्ध दिवस कार्यक्रम भएको बताइएको छ ।
कालिकोटमा दर्जन ठाउँमा भव्य कार्यक्रम गरि जनयुद्ध दिवस मनाएकाे छ । पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्म विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्न कार्यक्रम गरि जनयुद्ध दिवसलाई स्मरण गरेको छ ।
२५ अौ जनयुद्ध दिबशको अबसरमा ने. क. पा. डोटीले एउटा स्कुललाई खेल सामाग्री बितरण गरि मनाएको छ।
जनयुद्ध दिबशको अबसर पारेर गरिएको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै ब्युरो कार्यलय सचिव बिपिनले देश र जनताको मुक्ति नहुन्जेलसम्म क्रान्ति जारी रहने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको समापनमा बोल्दै जिल्ला ईन्चार्ज तर्कराजले अहिलेको यो राज्य ब्याबस्थाले देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको अारोप लगाउनु भयो । देश दिनदिनै भ्रष्ट्रचार, कालोबजारी ,महङ्गी , कर छली , सिमा अतिक्रमण लगायत राष्ट्रघात गरिरहेका सत्ता र सरकारका दलालहरुले देशलाई बरबाद बनाई रहेको भन्दै यी सबै मुद्धाहरुका बिरुद्ध लड्न अाम जनतालाई सचेत गराउनु भयो । एम सि सि पास गराउने नाममा देशमा अमेरिकि सेनाको को प्रेड स्थल बनाउन खोजियको छ। यसका बिरुद्ध अाम नेपाली जनता एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैबीच २५ औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा अखिल (क्रान्तिकारी ) दाङले स्मृति आवासीय मा. बि. मा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गरेको छ ।
कार्यक्रममा बाेल्ने वक्ताहरूले जनयुद्धको मुल नेतृत्वले बिचैमा धोका दिएर गए पनि अाफ्नाे पार्टीले शहिदका सपना पूरा गरि छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
अखिल (क्रान्तिकारी ) दाङ जिल्ला अध्यक्ष अनिल केसीको अध्यक्षता तथा सहिद परिवार समाजका केन्द्रिय सदस्य एवम् सहिद स्मृति आवासीय मा. बि. को विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य रैबहादुर बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यतामा कार््यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
बैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्राप्तिको लागि संघर्ष गरौँ !! भन्ने नारा सहित अखिल ( क्रान्तिकारी ) कैलालीले पनि २५ महान जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा जिल्लाको लम्की, घोडाघोडी, अत्तरिया लगायत विभिन्न ठाउँमा ब्यानर प्रदर्शन सहित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यसैबिच सुदूरपश्चिमकै अग्रणी शैक्षिक संस्था कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अखिल ( क्रान्तिकारी ) कैलालीले विद्यार्थीहरुलाई अबिर लगाएर चक्लेट बितरण गर्दै शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रममा संगठनका केन्द्रिय सदस्य तथा कैलाली जिल्ला इन्चार्ज बबरजङ सिह, जिल्ला अध्यक्ष सुबास जोशी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रिय सदस्य सिंहले महान सहिदहरुले देखाएको मुक्तिकामी बाटोमा निरन्तर अगाडि बढिरहने प्रतिबद्धता गर्दै सामाजिक फासिवादी सरकारले विद्यार्थी नेता कार्यकर्तामाथी थुपारिएका झुट्टा मुद्दा खारेज गरि दमन , धरपकड र विद्यार्थी माथीको प्रतिबन्ध तत्काल हटाएर सहज बाताबरण बनाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ । रास्ट्र र जनताको मुक्तिको लागि बिगत देखी नै विद्यार्थीहरुले अहम् भुमिका निर्वाह गर्दै आएको साथै महंगी , भ्रष्टाचारि, घुसखोरी, कालाबजारी, शैक्षिक माफिया, स्वास्थ माफिया, चेलीबेटी बेचबिखन , बलात्कारका विरुद्ध पनि संघर्ष जारी रहेको बताउनुभयाे ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पाल्पाले २५ औँ जनयुद्ध दिवस भव्य रूपमा मनाएको छ । नेकपा जिल्ला इन्चार्ज प्रवीणको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा व्यापक जनताको सहभागिता रहेको नेकपा पाल्पाले जनाएको छ । कार्यक्रममा अबिर आदानप्रदान गर्नुका साथै चकलेटलगायत मिठाइ पनि वितरण गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा नेकपा पाल्पा जिल्ला इन्चार्ज प्रवीणले महान् जनयुद्धका मूल्यमान्यताबाट स्खलित प्रतिक्रान्तिकारी, आत्मसमर्पणवादी र सुधारवादीहरूले जनयुद्धका सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई पद र पैसामा सौदाबाजी गर्दै लिलामी गरेको भन्दै अब सशक्त प्रतिरोध र आन्दोलन गर्न आह्वान गरे । सहिद र बेपत्ता योद्धाको विशेष स्मरण गर्दै इन्चार्ज प्रवीणले घाइते योद्धाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका थिए ।
इन्चार्ज प्रवीणले एकीकृत जनक्रान्तिको महासङ्ग्रामबाट गद्दारहरूको फैसला गरिने पनि बताए ।
कार्यक्रम विद्यार्थी नेत्री शारदा भण्डारीले सञ्चालन गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा अन्य जवस र मोर्चाका नेताहरूले पनि बोलेका थिए ।
कांग्रेसको प्रशिक्षण मंगलबारदेखि हेटौंडामा
कात्तिक २४, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नम्बर ३ का विभिन्न जिल्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई मंगलबारदेखि प्रशिक्षण दिने भएको छ। हेटौंडामा हुने प्रशिक्षणमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर र सिन्धुलीका महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। प्रदेश ३ का अन्य जिल्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई भने भक्तपुरमा यसअघि नै प्रशिक्षण दिइसकिएको छ। केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा महाधिवेशन […]
महरा प्रकरणले नेकपाभित्र ‘मनोवैज्ञानिक’ त्रास, अब के होला ?
Posted on October 3, 2019 October 3, 2019 Author Jaljala Online
असोज १६, काठमाडौं । संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीसँगको विवादित सम्बन्धले कृष्णबहादुर महराले सभामुख पद गुमाउनु पर्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिले यसरी राजीनामा दिएको पहिलो पटक हो । यद्यपि महरामाथि आरोप लगाउने महिलाको बोली फरक देखिन थालेको छ । उनले तीनकुनेस्थित महानगरीय प्रहरीवृत्त बानेश्वरमा बुधबार साँझ आफै […]
देवी ! के हजुर महिनावारी हुनु भएको छ?
भोली फागुन १७ गते शनिबार तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुस
मोडल खुस्बु ओलीलाई २ वर्ष कैद सजायको फैसला, यस्तो छ कारण